Sidee loogu dhoofiyaa feylasha Adobe Illustrator qaab xirfadaysan? | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo dhoofiyo feylasha ku jira Adobe Illustrator
Pablo Gonder | | Design Graphic, muujiye, Tababarada
Baro sida loogu dhoofiyo feylasha Adobe Illustrator hab xirfadaysan iyada oo loo marayo nidaamka dhoofinta kontoroolka ah oo aad ku dooran karto qaabab kala duwan, cabbir iyo qiimeyo kale si dhoofintaadu u noqoto mid sax ah oo xitaa dhoofinta faylal badan oo isku mid ah waqti isku mid ah lagu gaaro sidan waqti badbaadi hawshan aasaasiga ah ee naqshadeynta garaafka.
Dhoofinta feylku had iyo jeer waa wax ay tahay inaan maskaxda ku hayno mashruuc kasta oo muuqaal ah maxaa yeelay, sida xirfadle kasta oo farshaxan garaafku ogyahay, feyl shaashadda ku jira oo keliya feyl shaashadda ah, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in naqshadda aan samaynay si sax ah loogu dhoofiyo waxaa loo isticmaali karaa taageerooyinkaas oo loogu talagalay. Waa geedi socod sii dheeraan kara hadii aynaan garanaynin sida hawsha isku mar loo fuliyo. Waxaan ku bari doonaa sida loo dhoofiyo feylashaada Sawirka si xirfad leh, waa nidaam aan maalin kasta ka sameeyo adduunka daabacaadda, sameynta astaamo, calammo, iwm.
Markaan dhoofineyno feyl, waxa badanaa la sameeyaa waa inaan u dhoofino feylasha mid mid iyadoo la dooranayo cunsur gaar ah ama la dhoofinayo sabuurad dhameystiran oo ku jirta Sawirka, laakiin maxaa dhacaya markaan fileyaal badan leenahay oo aan dooneyno inaan dhoofino xagga tayada ama cabirka kala duwan? Nidaamkan waxaa lagu samayn karaa Sawir qaade si cadaalad ah otomaatig ah, waa ku habboon tahay in waqtiga la badbaadiyo.
Xagee naqshadeynta howshani waxtar u leedahay?
Nidaamkan faa iido weyn ayey u yeelan kartaa dhoofinta astaanta, sidaan sifiican u ognahay, sawirka shirkadu wuxuu kakooban yahay tiro aad u tiro badan oo noocyada garaafka ah ee astaanta ah halkaas oo aan ka heli karno midabbo, qaabab, dhammayn, iwm. Astaanta marwalba looma dhoofiyo hal qaraar laakiin waxaa loo dhoofiyaa dhowr qaraar iyadoo kuxiran ujeedkeeda: hadii astaanta loogu talagalay internetka waxaan adeegsaneynaa 72ppi hadii ay tahay daabicid waxaan adeegsaneynaa 300ppp, foomkaan oo dhan dhoofinta xirfadleydu waa mid ku habboon maxaa yeelay waxay noo oggolaaneysaa inaan wax walba dhoofino hal mar sida aan hoos ku arki doonno.
Markii aan haysanno faylal badan oo dabacsan oo ku yaal goobtayaga shaqada ee Sawirka, waxa kaliya ee aan sameyno waa ku jiid iyaga aagga dhoofinta in aan hadda arki doono.
Si aad u hesho liiska dhoofinta kaliya waa inaan dhagsano dusha sare Daaqadda muuqaalka / dhoofinta kheyraadka, dhagsii daaqadani oo menu cusubi ka furmayo qaybta bidix ee hoose ee barnaamijkeenna.
Kadib banaanka u soo saar dhoofinta menu waxa ay tahay inaan sameyno ayaa ah inaan bilowno jiidayo dhamaan walxaha aan rabno dhoofinta isku mar. Haddii aan isbeddel ku sameyno feylasha asalka ah, waxaa si otomaatig ah loogu sameyn doonaa faylalka lagu jiiday aagga dhoofinta, tani waa qumman tahay maxaa yeelay marar badan waa inaan isbeddel deg deg ah ku sameynaa feyl gaar ah.
Waxa xiga ee ah inaan sameyno si aan isla mar ahaan ugu dhoofinno Sawirka waa dooro doorbidyada aan rabno faylalkayaga, waxaan arki doonnaa sida menu-ku noogu oggolaado inaan u beddelo baxsashada, xallinta, cabbirka, qaabka, iwm. Doorbidyada ugu caamsan markaad dhoofinta faylka waa: xallinta iyo qaabka; xogtaan waxay maareeyaan inay wax ka beddelaan tayada dhoofkeenna iyo qaabka, qiime lama huraan u ah warbaahinta kala duwan.
Si tartiib tartiib ah ayaan u dhoofineynaa nashqadeena iyadoo la adeegsanayo nidaamkan u oggolaanaya xulashada dhammaan faylashaas aan dooneyno inaan dhoofino dhowr doorbidyo kala duwan waxaan badbaadin doonaa waqti badan hawshan.
Qeybta aan dhigeyno kheyraadka waxaan badali karnaa magaca feylasha si aan u helno iyaga si sax ah u kala soocaan oo markaa iska ilaali inaad ku dhex lumiso kumanaan faylal ah. Ujeedadu waa in la dhoofiyo iyadoo la raacayo shaqada aan ku hayno miis kasta oo shaqo ah, habka aan u fulinayo waa in la abuuro miisas shaqo oo dhowr ah lana bilaabo dhoofinta si habeysan.
Tusaale ahaan haddii aan qabo a miiska shaqada Sawirka shirkadeed waxa aan sameeyo waa dhoofinta kaliya sawirka shirkadda, markii dambe waxaan dhoofiyaa nashqado kale oo lagu sameeyay astaantaas laakiin taasi qayb kama ahan astaanta, tusaale ahaan, waxaan si wada jir ah u dhoofiyaa boorar iyo naqshadaha xayeysiinta loo sameeyay astaantaas. Hab kale ayaa ah in la helo feylallo Sawire oo kala duwan si loo helo naqshadaha aan ka sii kala fogaynno.
Wax kastoo nidaamkayagu yahay, waxa ugu fiican ayaa ah inaan waqti ku ilaalino dhamaan howlaha aan kari karno isla mar ahaantaana aan dhoofin karno, inaan waqti badan ilaalino isla markaana aan gaarno natiijooyin xirfadeed iyadoo aan ugu mahad celineyno nidaamka aan u maaraynayno inaan kula shaqeyno feylashayada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Sida loo dhoofiyo feylasha ku jira Adobe Illustrator
Waxsoosaarka hadda waxaa lagu heli karaa Adobe Premiere: qalab cusub oo lagu maareeyo mashaariicda filimka
Sharadka bilaashka ah ee Adobe ee xiritaanka: buugaag midabaynta iyo kulanno lala yeesho fanaaniinta ugu sarreeya